Izindlu e-Northwood Estate Mirrabooka - I-Airbnb
Izindlu e-Northwood Estate Mirrabooka
Mirrabooka, Western Australia, i-Australia
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Lilly
Sinekhaya elihle elinezitezi ezi-2, lapho ngihlala khona neNdodakazi yami, umlingani wayo, nabangane bethu ababili abanemilenze emine abanobungane.
Ikhaya lethu liwuhambo lwemizuzu embalwa ukuya enxanxatheleni yezitolo iMirrabooka, kanye nesiteshi samabhasi iMirrabooka. Siseduze nomgwaqo omkhulu waseReid futhi amaKM ayi-11 kuphela ukuya ePerth CBD.
Kunamakamelo okuphumula angu-3 atholakalayo okuphumula, ukubuka i-t.v, ukudlala imidlalo yevidiyo nokudlala upiyano. Indawo engaphandle enhle yokuchamisa ilanga, kanye namabhodi omcibisholo ambalwa ukuze ujabule.
Ikamelo lakho lihle futhi lithokomele, linombhede wendlovukazi kanye nekhabethe lokugcina impahla yakho. I-aircon ehlehlayo ngezimo ezishisayo nezibandayo, futhi ube nama-shutter efasiteleni lakho ukuze uthole ubumfihlo obuphelele, futhi kulabo abagcwele i-jetla, ubumnyama obuphelele bokulala izinsuku ezimnandi.
Indawo yokulondoloza imvelo enhle ngaphandle nje komnyango wethu ongemuva ukuze uhambe kahle ekuseni/kusihlwa. Ukudla kwasekuseni kunikezwa okusanhlamvu nethosti, netiye nomshini wekhofi.
Sithanda ukuhlangana nabantu abasha abavela kuzo zonke izizinda zokuphila, futhi sijabule futhi silungele ukukwamukela ekhaya lethu.
Indawo engumakhelwane enobungane
Ngiyajabula ukusiza nganoma iyiphi indlela, nokho ngisebenza emini ngakho uma kukhona okudingayo ngizokushiyela inombolo yami yokuxhumana. Uma kungenjalo ngizotholakala ukuze sixoxe ntambama.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mirrabooka namaphethelo